Bulshada Diinsoor oo soo Dhaweeyay in Al-shabaab laga saaray degmadaas – Radio Daljir
Agoosto 24, 2015 10:39 b 0
Isniin,,Ogoosto 24 ,2015(Daljir)_Degmada Diinsoor oo Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ay kala Wareegeen Al-shabaab dhamaadkii Bishii lasoo dhaafay ee July ayaa la sheegay in xalaaddeedu ay wanaagsan tahay.
AMISOM oo Sawirro kasoo qaadday ayaa Warbixin ay bogagooda ku qoreen ku sheegay in Shacabka degmadaas ku nool ay si diirran u soo dhaweeyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Somalia markii degmadaas laga saaray Al-shabaab, iyagoo intaas ku daray inay dhawaan ka dhacday munaasabad lagu soo dhaweynayo ciidamada huwanta ah oo ay ka Qayb-galeen Rag, dumar iyo Waayeel, kuwaasoo Qaarkood Waddooyinka magaaladaas isugu soo baxay.
Saraakiisha AMISOM ayaa sheegay in Shacabka Degmadu ay markii dambe meel Fagaare ah isugu tageen, ayna soo Bandhigeen Cayaaraha Hiddaha iyo Dhaqanka ah; iyagoo xusay in Shacabku iyagoo aan cabsi qabin ay Ciidamada Salaamayeen.
Dowladda Imaaraadka oo Balan-qaadyo u samaysay Somalia